ရိုက်နှက်ခံပြီး ကြီးပြင်းလာရတဲ့ကလေးတွေဟာ ပိုမိုရိုင်းစိုင်းလာနိုင် – Trend.com.mm
အရွယ်ရောက်နေတဲ့လူငယ် ၈ဝဝကို လေ့လာကြည့်တော့ ငယ်စဉ်တည်းက အရိုက်နှက်ခံခဲ့ရတဲ့ ကလေးတွေဟာ ကြီးလာရင် ပိုမိုကြမ်းကြုတ်ရိုင်းစိုင်းလာကြောင်း Texas ဆေးတက္ကသိုလ်မှ
တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငယ်စဉ်တည်းက အရိုက်ခံခဲ့ရတော့ အမှားတစ်ခုခုလုပ်မိရင် ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်အောင်လုပ်မှ ပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ သူတို့စိတ်ထဲမှာ စွဲမြဲသွားတတ်ကြတယ်။ ဒီစိတ်အစွဲကြောင့် လူဟာအရွယ်ရောက်လာလေ ပိုမိုကြမ်းကြုတ်လေဖြစ်ပြီး မိဘနဲ့သားသမီးကြားပိုမိုရှုပ်ထွေးတဲ့ ဆက်ဆံတွေရေးတွေသာ ရှေ့ လျှောက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
တစ်ခုခုအမှားလုပ်မိရင် သင်ခန်းစာယူတတ်အောင် လမ်းမပြပေးပဲ ကလေးကို ရိုက်နှက်ဖို့သာ တာဆူနေတဲ့မိဘတွေကြောင့် ကလေးရဲ့အနာဂတ်ဟာ မလှပတော့ဘူး။ အသက် ၁၉နှစ်နဲ့ ၂ဝ ဝန်းကျင်ကြားက လူငယ်လေးတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကျောင်းမှာ မကြာခဏ ရန်ဖြစ်လို့ ဒဏ်ပေးခံရ၊ မိဘအခေါ်ခံရတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုပေါ့… သုတေသီတွေက မေးခွန်းလေးတွေထုတ်ကြည့်ခဲ့တယ်။
သူတို့ငယ်စဉ်ဘဝမှာ အရိုက်ခံခဲ့ရတာ ၆၈ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်။ ဒီလိုမျိုးဝုန်းဒိုင်းကြဲပြီး ပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်လို့ သူတို့မှာ နောင်တရခြင်းလည်းမရှိဘူး။ တစ်ဖက်မှာ ဘယ်လောက်ထိနစ်နာသွားမလဲ.. ဒါတွေထည့်မတွက်တတ်တော့ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ကို နာကျင်အောင်လုပ်လိုက်မှသာ သူတို့စိတ်ဖိစီးနေတာတွေလျော့ကျသွားမယ်လို့ တွေးထင်လာကြတယ်။
နောက်ပြီး ကလေးကို ခါးပတ်နဲ့ရိုက်တဲ့အကျင့်။ အခန့်မသင့်လက်လွန်သွားရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ အခြားကလေးတွေနဲ့ယှဉ်ရင်သူတို့ စိတ်ထဲအားငယ်နေရတတ်ပါတယ်။ တစ်ခုခုအဆင်မပြေဖြစ်တိုင်း မိဘကို ရင်မဖွင့်ရဲတော့ဘူး။ စိတ်ထဲ သိမ်းဆည်းထားများပြီး မွန်းကြပ်လာ
မယ်။ နောက်ဆုံး ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေနဲ့ အတွေးတွေနောက်ကျိလာတော့တယ်။
အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ကလေးတွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ရာမှာ နည်းစနစ်ကျမှန်ကန်ဖို့လိုပါတယ်။ ကမ္ဘာကြီးရဲ့များစွာသော လုပ်ငန်းတွေမှာ သူတို့တစ်ချိန် ဦးမဆောင်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်ပြောလို့ရမလဲ? ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အချို့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ပြင်သစ်၊ဆွီဒင် နဲ့ စကော့တလန်တို့မှာကလေးကိုရိုက်နှက်ဆုံးမခြင်းအား ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာဆို လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ ကလေးကို ပြစ်ဒဏ်ပေးနေတယ်ဆိုရင် ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
အမေရိကန်မှာတော့ ကလေးကိုရိုက်နှက်တာ တရားဝင်ပေမယ့် ခုနကလိုပဲ အပြစ်ပေးရတဲ့အကြောင်းရင်း ခိုင်လုံမှဖြစ်ပါမယ်။
တစ်ချို့မိဘတွေက ဒီကလေးတွေ အသားနာမှ မှတ်မယ် ၊ ဒါမှ ကောင်းကောင်းနားလည်မှာလို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ ကောင်းဖို့ဆိုတာထက် အဆိုးကပိုများပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်ကို သေချာနားလည်အောင် လုပ်ဖို့က မိဘတွေရဲ့တာဝန်ပါ။ ဘယ်လိုလမ်းပြပေးရင် ကလေးက သင်ယူတတ်မြောက်လွယ်တယ်ဆိုတာ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်မယ်လေ။ ကမ္ဘာကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲအောင် တစ်ချိန်မှာ လုပ်ဆောင်လာမယ့် အနာဂတ်ကြယ်ပွင့်လေးတွေကို သေချာလမ်းပြ
သွန်သင်ပြီး ပျိုးထောင်ရအောင်လား ! 🙂